Nhau - Iyo graphite electrode musika inochengetedza yakatsiga kumusoro kumusoro maitiro.
Kunyangwe iyo graphite electrode musika yanga iri mumwedzi mitanhatu zvichikwira kutenderera, izvozvi main graphite electrode makambani achiri muchimiro chekuputsa nekuda kwekuwedzera kwezvinhu zvezvinhu zvakasvibirira. Panguva iyi, mutengo kumanikidzwa ari graphite electrode musika kwakakurumbira, uye mutengo graphite electrode acharamba akadzikama kumusoro kumusoro muitiro. Izvo zvakakonzera zvinokonzeresa zvinotevera.
1. Mari yekumanikidza: Iyo yazvino graphite electrode mbishi zvigadzirwa zvinogadziriswa kazhinji, uye graphite electrode mbishi zvinhu zvakaderera-sarufa petroleum coke, tsono coke. Mutengo wecoccined coke uye pombi zvakanyatso chengetedza huwandu hwese kumusoro, uye mutengo wekumanikidza weiyo graphite electrode musika zviri pachena kuti yakakwira .. Pasi pekumanikidza, graphite electrode makambani anofanirwa kuwedzera mitengo kuti achengetedze iwo mwero wekubhadhara.
Companies 1, Graphite makambani emagetsi emagetsi ane mamiriro ekumirira-uye-kuona mukugadzirwa
） 2, Kupiwa kweimwe nzvimbo zviwanikwa kwakasimba.
（3, Dual kudzora kwesimba kushandiswa muInner Mongolia.
（1） Mushure meMutambo weChirimo, iyo yemagetsi arc furna simbi musika ichiri padanho rakaderera. Zvimwe zvigayo zvesimbi zvichine masheya emagetsi e graphite asina kumboshandiswa, uye zvigayo zvesimbi zvine mashandiro epakati mukutenga graphite electrode.
） 2, Sezvo mutengo we graphite electrode mbishi zvinhu zvichiri kukwira, uye nekuda kwekuomeswa kwekushambadzira kwe-Ultra-yakakwira-simba diki uye yepakati-saizi magadzirirwo mu graphite electrode musika, musika wezasi uri zvishoma nezvishoma uchibvuma kuenderera kuwedzera kwe graphite electrode mitengo.
（3, Mumusika we graphite electrode ekisipoti, kutakura mitoro kwakanyanya kukwirira nguva pfupi yadarika, uye graphite electrode kunze kwenyika inoenderana nemimwe mitemo.
Maonero emusika: Parizvino, pasi pemamiriro ezvinhu ekuti pane yakanaka maitiro padanho rekudhirowa yemusika we graphite electrode, mutengo we graphite electrode ucharamba uchikwira sezvo mutengo wezvigadzirwa uchikwira nekuda kwekuwedzera kuri kuwedzera kwemutengo.